Froala: Mee ka WYSIWYG Rich Text Editor Bugharịa Platform Gị Martech Zone
Ọ bụrụ na ibidola n'okporo ụzọ ịzụlite ikpo okwu ebe ịchọrọ ederede ederede nke bụ ihe-ị-hụ-bụ-ihe-ị ga-enweta (WYSISYG), ị maara otú o si sie ike. Mgbe m na-arụ ọrụ na onye na-eweta ọrụ email, ọrụ ịzụlite ma nwalee onye editọ na-arụ ọrụ iji nyeghachi nzaghachi, email-ahịa email HTML were ndị mmepe ọtụtụ mbipụta iji tọọ ma dozie. Ọ dịghị mfe.
Ihe ndezi ederede bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ịchọrọ ịmịnye na ikpo okwu nke na-eme ka ọdịnaya dịwanye elu, mana ekwesighi ịchọ ọnwa ma ọ bụ afọ nke mmepe. Onye ndezi Froala bụ editọ ederede na-enwusi ọkụ nke na-adị ọkụ, ahaziri nke ọma, nwee nchebe, dịkwa mfe maka otu mmepe gị iji tinye aka n'ime ihe niile na-ewu ewu frameworks.
Froala Editor Design Atụmatụ
Ihe okike n’oge a - ọmarịcha ọhụụ nke oge a na ndị ọrụ ga-ahụ n'anya.
Retina Njikere - More zuru ezu, mma aesthetics na nkọ Akara ókwú.
Gburugburu - Jiri ndabara ma ọ bụ isiokwu gbara ọchịchịrị, ma ọ bụ mepụta isiokwu nke gị site na iji faịlụ isiokwu dị obere.
Usoro ihe omuma - Froala ederede ederede bara ụba na-enye ọrụ zuru oke site na ntanetị kensinammuo nke ndị ọrụ ga-ahụ nke eke iji.
Popups - popups ohuru, emeputara maka ihe omuma di egwu.
Akara ngosi SVG - akara ngosi SVG n'ime ụlọ, akara ngosi vectorial nwere ike ịmịcha mma na ogo ọ bụla.
Stdị omenala - WYSIWYG HTML nchịkọta akụkọ bụ naanị otu nke nwere ngwa ọrụ omenaala pụrụ iche iji gbanwee ọdịdị ahụ wee nwee mmetụta otu ịchọrọ.
Ogwe Ngwaọrụ - Ọtụtụ bọtịnụ? Ikekwe ọ bụghị n'usoro ziri ezi? I nwere ikike zuru oke na ogwe ngwaọrụ ihe editọ na nha ihuenyo ọ bụla.
Omenala All Way - Enwere ike ịhazi ihe niile ma ọ bụ megharịa ya: bọtịnụ, wedaa, popups, akara ngosi, ụzọ mkpirisi.
Nnọọ Ngwaọrụ - Iji mee ka ahụmịhe edezi nke ngwa WYSIWYG so na ihe ndetu ga-anọgide na elu ihuenyo ahụ ka ị na-agbadata.
Mmebi iwu - Ọ bụrụ na ogwe ogwe ihe ederede ederede ọgaranya agaghị ekpuchi isi na ibe weebụ gị, wepụta ya maka ya.
Ogwe ngwaọrụ N’okpuru - Mfe ịgbanwe WYSIWYG HTML nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ si n'elu gaa ala, ma na-ejikwa ogwe osisi nnyapade ma ọ bụ dechapụ.
Ihuenyo zuru oke - alingnagide ọtụtụ ọdịnaya chọrọ nnukwu ebe edezi. Bọtịnụ ihuenyo zuru oke ga-agbasa ebe ndezi ahụ na oghere webpage niile.
Page zuru - Ide na idezi peeji HTML niile nwekwara ike. Enyemaka maka ozi ịntanetị, mana ọ bụghị naanị, a na-ekwe ka ojiji HTML, HEAD, AHOD na nkwupụta DOCTYPE.
Iframe - WYSIWYG HTML nchịkọta akụkọ nchịkọta nwere ike ịnọrọ iche na ibe nke ibe site na iji iframe yabụ enweghị ụdị esemokwu ma ọ bụ esemokwu ederede.
Froala Editor Performance Atụmatụ
fọrọ nke nta - Ugboro isii ngwa ngwa karịa ntabi anya, onye ederede ederede bara ọgaranya ga-ebido ihe na-erughị 40ms.
fechaa - Site na ya gzipped isi nke naanị 50KB, ị nwere ike mee ka ihe dị ịtụnanya edezi ahụmahụ gị ngwa na-enweghị adịkwa loading ọsọ.
Ngwa mgbakwunye Dabere - moddị modulu na-eme ka WYSIWYG HTML nchịkọta akụkọ rụọ ọrụ nke ọma, dị mfe nghọta, gbasaa ma debe ya.
Otutu editọ na a Page - Otu ma ọ bụ iri ederede editọ na otu peeji? You gaghị enwe ọdịiche dị, setịpụrụ ha ka ha bido na pịa.
HTML 5 - Froala Rich Text Editor wuru nkwanye ugwu na iji uru HTML 5.
CSS 3 - Kedu ụzọ kacha mma iji melite ahụmịhe onye ọrụ karịa iji CSS 3? Mmetụta aghụghọ na-eme ka onye editọ ka ukwuu.
Froala Editor Mobile Akụkụ
A gam akporo na iOS - A gam akporo na iOS ngwaọrụ a nwalere ma kwado ya.
Resili foto - Froala Rich Text Editor bụ nke mbụ WYSIWYG HTML nchịkọta akụkọ nwere onyogho oyiyi na-arụ ọrụ ọbụlagodi na ngwaọrụ mkpanaka.
Nbudata vidiyo - nke izizi webatara resize maka vidiyo ọbụlagodi mgbe ha na-egwu egwu. Ma n'ezie, ọ na-arụ ọrụ na mobile kwa.
Nwepụta na-eme mgbanwe - Ọdịnaya ị na-edezi ga-aza. Ha WYSIWYG HTML nchịkọta akụkọ nwere ike ijikwa oyiyi resize iji percentages.
Ogwe ngwaọrụ site na Ihuenyo - Maka oge izizi na nchịkọta ederede ederede bara ụba, enwere ike ịhazi ogwe ngwaọrụ maka nha ihu ọ bụla.
Froala Editor SEO Akụkụ
Dị ọcha HTML - Froala mepụtara algọridim nke na - ehichapụ ihe HTML na - akpaghị aka nke ederede ederede ha bara ọgaranya. Dee na-enweghị nchekasị, WYSIWYG HTML nchịkọta akụkọ na-emepụta ihe dị oke ọcha, na-eche ka igwe injin ya chọọ ya.
Image Alt Tag Nkwado - Foto ọzọ bụ ederede egosiri ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị enweghị ike igosipụta onyonyo ahụ. Ọ bụkwa ederede ederede engines na-eji, yabụ elegharala ya anya. Enwere ike ịtọ ederede ọzọ na popup edit image.
Njikọ Mbụ Kpido Nkwado - Agbanyeghị na aha aha njikọ amabeghị nwere isi mmetụta SEO, ọ na - enyere ndị ọrụ aka ịnyagharịa mfe site na webụsaịtị gị. Ọ bụghị otú ahụ dị mkpa, mana ọ dị mma ịnweta. Tọọ aha njikọ na popup njikọ.
Froala Editor Nchekwa atụmatụ
Froala WYSIWYG HTML Editor nwere usoro nchekwa siri ike megide mwakpo XSS. N'ọtụtụ oge, ị gaghị echegbu onwe gị ma ọlị banyere nke a, mana anyị ka na-akwado ka ịme nyocha ndị ọzọ na sava gị.
Yana-akwado HTML niile, a sụgharịrị onye editọ ahụ n'asụsụ 34 dị iche iche, nwere nkwado RTL na nchọpụta akpaaka, yana Spell Check.
Froala nwere a Ntinye ngwa ngwa iji jikọta onye nchịkọta akụkọ na saịtị WordPress gị.
Gbalịa Froala si Online HTML Editor Budata Froala
Tags: nchịkọta akụkọnchịkọta akụkọ ngwa ngwaeditọ HTMLeditọ ederede ederedeederede nchịkọta akụkọnchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọnwysiwygnchịkọta akụkọ wysiwyg
Etu esi amata ohere SEO na saịtị gị iji melite ogo na nsonaazụ ọchụchọ site na iji Semrush